Ngathi-i-Haojing International Trade (i-Shanghai) Co., Ltd.
IHaoJing yamanye amazwe
Iminyaka engama-20 yamava okusebenza
I-Haojing yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe yasekwa ngo-2020. Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-2003 Sineefektri ezimbini ezizezabo eShanghai naseZhejiang. Sisixhobo semaski sokubonelela ngesisombululo sezixhobo esizinikezele ekunikezeleni izisombululo ezikumgangatho ophezulu kubathengi kwihlabathi liphela.
Okwangoku sinabasebenzi abali-180, kubandakanya i-R & D engama-30 kunye nabasebenzi bobuchwephesha. Emva kweminyaka yokusebenza nzima, inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-100 kwaye iye yaba lishishini elinobuchwephesha obuphezulu elixhaswa nguRhulumente wase-Songjiang weShanghai.
Ukuqala ngo-2020, ukutshintshwa kwe-HAOJING kurhwebo lwasekhaya ukuya kurhwebo lwangaphandle, kwaye uqalise ukuvelisa izixhobo zomatshini wesigqubuthelo phantsi kwendalo ngokubanzi, kubandakanya oomatshini be-mask abasicaba, oomatshini be-mask be-N95 kunye noomatshini beemaski zekomityi, njl. iimfuno, kubandakanya ilaphu elingalukanga, ilaphu elinyibilikisiweyo, umtya wempumlo kunye nentambo yendlebe, njl.
Iindidi zemveliso zethu zigqibelele, ezinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi, kubandakanya izinto zokwenza imveliso yemaski, esinokubonelela ngayo. Iimveliso ezininzi kunye neetekhnoloji zifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza kwaye zafumana imvume kwi-CE.
Emva konyaka wophuhliso, izixhobo zethu zithengisiwe eUnited States, eTurkey, eSpain, eMexico, ePakistan naseMzantsi Korea.Zonke iimveliso zethu ziya kuvavanywa kwaye kudutyulwe ividiyo ngaphambi kokuthunyelwa, kwaye izixhobo ziya kuba lunyango lokulwa umhlwa ukuqinisekisa ukuba abathengi bangazisebenzisa kakuhle izixhobo zethu.
Izicelo zibandakanya ukhathalelo lwempilo, umzi-mveliso we-elektroniki, ushishino lokutya, ukhathalelo lobuhle kunye nemeko yezoshishino, njl.
I-Haojing igxile kwimveliso, uphuhliso kunye nokuthengisa koomatshini be-N95, oomatshini bemaski abasicaba, oomatshini beemaski zekomityi, oomatshini beemaski ze-KF94 kunye noomatshini bemaski yeduckbill. Zili-11 iindidi ezahlukeneyo zeemveliso, kubandakanya imigca yemveliso ezenzekelayo kunye neyenzekelayo.
Sineendibano zocweyo ezi-3 zokuvelisa kunye neendibano zocweyo ezi-2. Inesixhobo sayo se-CNC sokuchaneka ngokuchanekileyo, iziko le-axis ezintlanu kunye ne-6000W laser cutting machine.
Indawo yokusebenzela icocekile kwaye icocekile. Kukho izinto ezicocekileyo zokucoca yonke imihla. Ngoku umzi-mveliso unoomatshini abaninzi beemaski kwisitokhwe, esinokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Sinemigca emininzi yokuvelisa ukuqinisekisa ukuba abathengi banokufumana umatshini wemaski kwiveki enye. Siyakwamkela ukwenziwa ngokwezifiso. Oomatshini beemaski ezenziwe ngentando bangathunyelwa ngaphakathi kweentsuku ezingama-20 zokusebenza.
Umgangatho ophezulu, isantya esizinzileyo, kwaye usebenza kakuhle kakhulu. Yeyona khetho ilungileyo yokwenza imaski, isenzele ixabiso. —— UDmitry
Ndinawo umatshini, ipakethe yawo ilunge kakhulu, xa ndiqala ukusebenzisa, le injineli yefektri indinika inkxaso engcono, ingcali .—— Murat
Le yinkampani eyoyikisayo ukujongana nayo. Ummeli wenkonzo yam wayenomonde, wayiphendula yonke imibuzo yam kwaye wanika iingcebiso ezinolwazi kunye nexesha elifanelekileyo kunye neengcebiso. —Humphrey
Eli lixesha lam le-Frist lokuthenga umatshini ovela e-China, Ukusuka kolunye uluvo lwabathengi, bathi iimpahla zaseCHINA azilunganga, kodwa ndonwabile kakhulu ndinethamsanqa lokudibana ne-HAOJING, bandinika eyona nkonzo ilungileyo emva kokuba ndiyifumene. —YiHaroon
Imitha yam ifakiwe kwaye isebenza ngesantya sama-40pcs ngemizuzu kwaye isebenza kakuhle, ndiceba ukuthenga iseti enye kwakhona, mandibe nexesha elimyoli, enkosi inzuzo! -U-Omar
Siyinkampani yokuvelisa kunye neyorhwebo yokudibanisa ushishino kunye norhwebo. Iqela lethu lifana nosapho olukhulu. Wonke umntu unoxanduva lomsebenzi wakhe. Sinenkcubeko yethu yokusebenzisana, ekuxoxwa ngayo sonke. Unyaka nonyaka sinemisebenzi yeqela kwaye sihamba kwiindawo ezahlukeneyo. Nyanga nganye kukho iminyhadala yokuzalwa kwabaqeshwa, kwaye sisebenza kwimeko eyonwabileyo kwaye ekhululekile. Ewe ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sineenkqubo zolawulo olungqongqo ukuze sikwazi ukuwugqibela ngcono umsebenzi wethu kwaye senze ukuba inkampani yomelele kwaye yomelele.